ဂါမဏိ – သန်းရွှေ၏အတွေး သိန်းစိန်၏နိုင်ငံရေးနဲ့ မင်းအောင်လှိုင်၏စစ်ရေး (သို့မဟုတ်) ကိုးကန့်အရေးတော်ပုံ – MoeMaKa Burmese News & Media
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ BGF နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကို ငြိမ်းချမ်းရေးအထူးဒေသ (၁) လို့ ၁၉၈၉ ခုကတည်းက နာမယ်ပေးထားတဲ့ ကိုးကန့်အပစ်ရပ်အဖွဲ့ MNDAA (မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော်) က လက်မခံ လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ဖုံကျားရှင်းခေါင်းဆောင်တဲ့ ကိုးကန့်အပစ်ရပ်အဖွဲ့ကို အပြုတ်ချေမှုန်းခိုင်းခဲ့ပါ တယ်။
← မေငြိမ်း – ကျမနဲ့ မြန်မာစာ (၂)
ကာတွန်း အောင်မော် – မိဘ ပြည်သူများခင်ဗျား … →
September 11, 2016 September 11, 2016 Aung Htet
ရသဆောင်းပါးစုံ အခန်းဆက်များ အုန်းနုိုင်
December 22, 2014 Aung Htet
4 thoughts on “ဂါမဏိ – သန်းရွှေ၏အတွေး သိန်းစိန်၏နိုင်ငံရေးနဲ့ မင်းအောင်လှိုင်၏စစ်ရေး (သို့မဟုတ်) ကိုးကန့်အရေးတော်ပုံ”
# ဖုံကျားရှင်းဟာ ဘိန်းဘုရင်ဖြစ်တာ ဘယ်လိုမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။
# ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို လက်မခံမချင်း ဗမာပြည်ရဲ့အကျပ်အတည်းဟာ ပြေလည်နိုင်ပါမယ်
thank you, ဂါမဏိ – တစ်ပတ်တစ်စောင် ရေးပေးပါ။
Paing Htwe says:
Thank you so much Mr. GarMaNeet. This is very useful article. Some of us were thinking Military is having the war to protect the country.
In Democracy system , only ONE UNITED ARMY AND NEED PEACE IN COUNTRY, need and readalot, get education/knowledge. too many army in country, never get peace and always get dead.
STUDENTS FIGHT FOR GOOD EDUCATION, YOU KNOW THEY FIGHT FOR DEAD.
(EVERY BODY CAN NOT TAKE WHIT HIM/HER EVERYTHING, WHEN DEAD, FUNNY )
Hope we haveagood system everyone can agree on, then we have onlyasmall military with superior quality.